Home Wararka Gudaha Afhayeen cusub oo loo magacaabay Villa Somalia
Afhayeen cusub oo loo magacaabay Villa Somalia
Wareegto aan ilaa weli si rasmi ah madaxtooyada u shaacin in lagu magacaabay Afhayeenka cusub ee madaxtooyada Villa Somalia ayaa si hordhac ah wariyaha booskaasi xajistay baraha bulshada loogu hambalyeynayaa.
Agaasime kuxigeenkii hore ee Villa Somalia Cabdinuur Maxamed ayaa u hambalyeeyay afhayeenka cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo lagu magacaabo C/kariin Cali Kaar.
Afhayeen cusub oo loo magacaabay Villa Somalia pic.twitter.com/DrweyknbqM
— RADIO HALGAN (@rhalgan) May 29, 2022
C/kariin oo ka mid ah wariyeyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala telefishinka Somali Chanel ayaa inta aysan Villa Somalia kasoo bixin digreetadii magacaabistiisa durbadiiba baraha bulshada lagu ogaaday.
Agaasime Cabdinuur ayaa ugu hambalyeeyay xilka culus ee loo magacaabay C/kariin, wuxuuna u rajeeyay inuu illaah la garab galo xilka loo igmaday, dulqaadkeedana uu yeesho maadaama howl dhib badan ay tahay.
C/kariin Cali Kaar ayaa horay usoo noqday guddoomiye degmo, balse laga qaaday xilka, wuxuuna dib ugu laabtay shaqadiisii wariyenimo oo uu daadihin jiray wareysiyada xasaasiga ah.
Afhayeenkii hore ee Villa Somalia, C/rashiid Maxamed Xaashi oo khibrad sareysa u lahaa tabinta wararka iyo dhacdooyinka Villa Somalia ayaa booskiisa laga sugayaa inuu buuxiyo C/kariin Cali Kaar.
Previous articleXog: Isbadalka xilalka ee Xasan Sheekh uu wado oo qeyb ka ah taliyeyaal ciidan
Next articleAkhriso: Liiska magacyada xubnaha uu magacaabay Xasan iyo beelo iska waayey
Mareykanka oo Taalibaan ku wareejiyey maxbuus xirnaa 15 sano
Hirshabelle oo shaqada ka joojisay shirkada ka shaqeeyo deegaanada Maamulkooda.